Home » ဂျော့ဘ် » CCSL Transcriptionists (သာလျှင်အတွေ့အကြုံ)
CCSL Transcriptionists (သာလျှင်အတွေ့အကြုံ)
ဧဒင်ဥယျာဉ် Prairie, MN
ဗီဒီယိုအားကူးရေး၏တစ်မိနစ်လျှင် $ 5.85
နေ့စဉ်ကူးယူမှတ်တမ်းတင်တိ, 10 နှစ်ကျော်များအတွက်လျှို့ဝှက် Post-ထုတ်လုပ်မှုကူးယူပေးလျက်ရှိသည်။
We are continuously seeking အတွေ့အကြုံ
We areadedicated team seeking enthusiastic, အတွေ့အကြုံ individuals who have know how to produce Combined Continuity & Spotting Lists (CCSL); Combined Continuity & Dialogue Lists (CCDL); As-broadcast scripts (ABS); Dialogue lists.
ဒါဟာဝေးလံခေါင်သီ, On-ခေါ်ဆိုခ, 1099 အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
CCSL ကူးယူအတွက်2နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံ * နိမ့်ဆုံး
* အသေးစိတ် oriented
ကူးယူမှတ်တမ်းတင်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ * အတွေ့အကြုံ
* Microsoft Word ကို
တစ်ဦးချင်းစီထုတ်ကုန်များအတွက်ပေးထားသောတင်းပလိတ်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များသုံးစွဲဖို့ * နိုင်ခြင်း
ဤနေရာတွင်ကူးယူဘို့ဗီဒီယို * Keen နားကို
သင်အင်တာဗျူးဖြစ်စဉ်ကိုရှောက်သွားလျှင်ဥပမာတစ်ခု5မိနစ် CCSL ကူးယူမှတ်တမ်းတင်စမ်းသပ်ဖေါ်ထုတ်ရန်မျှော်လင့်ပါလိမ့်မည်။
The Rate of pay is $5.85 per minute of video transcribed which is တူညီသော to $100.00 – $150.00 per hour depending upon your Transcription Turnaround Time (TAT).
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-05-15